Maitiro Ekutsvagisa Akanaka Mahashtags | Martech Zone
Mahashtag anga anesu kubva ipapo kuvhurwa kwavo makore masere apfuura pa Twitter. Chimwe chezvikonzero nei takagadzira a Shortcode plugin yaive yekuwedzera kwedu kuoneka pa Twitter. Chinhu chakakosha cheiyo yaive kugona kuwedzera ma hashtag mukati mekfupi kodhi. Sei? Zvichitaurwa zviri nyore, vanhu vazhinji vanotsvagisa Twitter nenzira inoenderera zvichibva pama hashtag akagovaniswa. Kungofanana nemazwi akakosha kutsvaga, ma hashtag akakosha pakutsvaga mune vezvenhau.
Chimwe chezvinyorwa zvedu zvinonyanya kufarirwa ndezvedu runyorwa rwema hashtag ekushandisa ekutsvagisa inowanikwa pawebhu. Asi mushambadzi anoshandisa sei imwe yeaya maturusi kuti aone akanakisa ma hashtag anokwanisika kuti awedzere kuoneka kwavo kwemagariro enhau.
Icho chikonzero nei ma hashtag akakurumbira zvakadaro nekuti ivo vanotendera yako positi kuti ionekwe nevazhinji vateereri vanogona kunge vasati vatove nehukama newe. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti zvakagadzirwa sevhisi, senzira yekupfupisa maitiro kana zvasvika pakutsvaga zvimwe zvakatumirwa nezve misoro yaunofarira.
Uyu muenzaniso kubva kuSalesforce unoshandisa maturusi akati wandei.
On Tagboard, kurudziro ndeyekuongorora huwandu, manzwiro uye mamwe ma hashtag ane hukama munzvimbo zhinji dzezvenhau mapuratifomu. Chinangwa chako chinofanirwa kuve chekuziva chakanyanya kufarirwa icho chakanyanya kukoshesa kumusoro wenyaya rezvemagariro enhau kana chinyorwa chauri kureva
On Twitter, unogona kushandisa yakakura yekutsvaga mashandiro. Tsvaga izwi mubhokisi rekutsvaga uye iwe unokwanisa kudzikisira pasi mhedzisiro kuburikidza akati wandei tabo - kumusoro (mapikicha uye ma tweets), rarama, maakaunzi, mapikicha, uye mavhidhiyo. Unogona kusefa kutsvaga paTwitter kana mukati mewewe network. Iwe unogona kunyange kungotsvaga zvakakukomberedza iwe nzvimbo.
On Instagram, iwe unongoda kutaipa iyo hashtag uye Instagram ichakurudzira nekukurumidza mamaki ekufamba pamwe neyavo posvo kuverenga. Wedzera ma hashtag ayo ese akakodzera uye ane solid count.
Ipo Twitter ichiganhurira mavara ako akagovaniswa mune yako yekuvandudza, kusanganisira ma hashtag, Instagram inokutendera iwe kuti ugovane anosvika gumi nemana ma hashtag emufananidzo wega wega kana vhidhiyo yakagovaniswa!
Heino zano rangu… be nguva dzose! Fungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag iwe yaunonyora nezvayo pamwe nemamwe madhizaidhi enhau enhau. Zvino, chimbofungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag uye anowanzo kuwana zvitsva zvemukati uye zvidzoreso zvinogadzirwa newe. Ndeupi iwe waunofunga kuti unokupa iwe mukana uri nani wekuteverwa, kuvaka ruzivo, kubatana neakaundi, kana pakupedzisira kuita bhizinesi naye.
Fungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag iwe yaunonyora nezvayo pamwe nemamwe madhizaidhi enhau enhau. Zvino, chimbofungidzira mushandisi ari kutsvaga hashtag uye achiwanzo kutsvaga zvinyorwa zvitsva uye zvigadzirwa zvakagadzirwa newe. Ndeupi iwe waunofunga kuti unokupa iwe mukana uri nani wekuteverwa, kuvaka ruzivo, kubatana neakaundi, kana pakupedzisira kuita bhizinesi naye.
Tags: akanakisa hashtagsarudza ma hashtagkutsvagisa hashtagsei kutiInstagramkelsey jonessalesforce canadatagboardTwitter
Ndatenda neruzivo, Douglas. Ndinoda kuwedzera ruzivo rwangu nekushandisa hashtag.
- Instagram. Kuodzwa mwoyo sezvo vanhu vanozvishandisa kune spam uye zvinyorwa zvisina kufanira. Semuenzaniso #gungwa rinondiratidza mifananidzo mina chete ine chekuita negungwa uye nezvimwe kune chero zvimwe zvinhu asi kwete gungwa.
- Twitter. Mamiriro ezvinhu ari nani, asi zvakadaro haana kunyatsonaka. Chandinoda kutaura ndechekuti zvinhu zvakakosha zvine ma hashtag akakodzera zvinopa zvakarasika muruzha. Saka kukwezva kutarisa kwairi iwe unofanirwa kushandisa chimwe chinhu, senge mufananidzo wakanaka kana kutaura vanhu mukutsanangura
Zvita 21, 2015 na12:55 PM
Pfungwa yakanaka, Alex. Kushungurudza zvachose kana vakashungurudzwa. Pamwe ivo vachawedzera yekuzivisa sisitimu mune ramangwana apo hashtag spammers inogona kubatwa uye maakaundi avo adzimwa.